Joyina noma yikuphi ukusakazwa bukhoma kwamakhulu futhi uxoxe namantombazane e-cam avela emhlabeni wonke mahhala! Xoxa nabesifazane. Amakholi wevidiyo angahleliwe aya kwabesifazane kumagumbi okuxoxa ngevidiyo aku-inthanethi, mahhala futhi ngaphandle kokubhaliswa. Iwebhu, uhlelo lokusebenza lwe-iPhone, i-Android
I-U LIVE Chat iyisevisi ephelele yokusakaza nokwabelana ngamavidiyo noma izithombe nenkampani! Yenza amaposi asheshayo futhi ubuke ukuthi inani lababhalisile likhula kanjani.
Akunasidingo sokubhalisela ingxoxo ngoba lapha ungabuka izithombe nama-vids mahhala ngaphandle kokubhaliswa. Vele ukhethe isigaba osithandayo futhi ujabulele okuqukethwe okufanele nokuthakazelisayo.
Ingabe ungumenzi wokuqukethwe? Thola imali ngokusakaza nokuthumela okuqukethwe kwakho engxoxweni. Abasebenzisi abamangazayo ngokushicilelwa okuthakazelisayo futhi baxoxa ngamazwana ngezihloko ezimangazayo.
Ungadlala ngothando kanjani nentombazane?
Ukuxoxa namantombazane athakazelisayo kumane kukuchofoza okumbalwa kude nawe. Hlanganyela nobuhle obusha obuvela emazweni azungeze i-170 emhlabeni usebenzisa i-chatroulette yethu. Thola abangane, ukuthandana okusha noma umane ujabule namantombazane abukhoma angaphandle mahhala! Akukho kulokhu okuthakazelayo? Hlola izinkulungwane zokushicilelwa ezihlukaniswe ngezigaba eziningi futhi ungachithi isikhathi ezintweni ongazithandi.
Bhalisa engxoxweni futhi ube yingxenye yemifudlana engenakubalwa ebukhoma. Hlangana nobuhle engxoxweni ngayinye yalezi zingxoxo. Bhalisela amantombazane owathandayo bese uthola izaziso ezisheshayo ezincwadini zawo endaweni yesikhulumi. Ngabe ufuna ukujabulisa intombazane? Izipho zethu ngeke zishiye noma iyiphi intombazane ingenandaba - vele wenze isipho bese ubuka ukusabela okujabulisayo!
Intombazane evela ngokuxoxa okungahleliwe
Bheka nje la mantombazane avela emazweni angaphezu kwe-170 engxoxweni bese ukhuluma nanoma ngubani omfunayo! Khetha intombazane oyithandayo futhi uxoxe mahhala noma ngabe ukuphi empeleni. Ngabe ufuna ukuxoxa ngasese? Nge-U LIVE ungayiphatha ngemizuzwana - thokozisa amantombazane ngokuphana kwakho futhi uxhumane nawo ngasese ngendlela othanda ngayo.
Thola ukubhaliswa kwe-VIP bese ukhohlwa nganoma imiphi imikhawulo. Ngokubhalisela i-VIP uzoyeka ukubuka isikhathi futhi uzogxila ngokuphelele ekusakazweni onentshisekelo kukho. Izinkulungwane zezithombe nokushicilelwa kwamavidiyo, kanye nakho konke ukusakazwa - konke lokhu kuzokukhokhela ngokuphelele.